सकरात्मक र सफलताकाे लागि प्लेटोका वाणीहरू – आफ्नो प्रेरक संसार
सकरात्मक र सफलताकाे लागि प्लेटोका वाणीहरू
Bibas chetan — ७ असार २०७६, शनिबार १३:००0comment
१. मानिसले सफल हुनका लागि हरसम्भव मिहिनेत गर्छ । विभिन्न हतकन्डा अपनाउँछ, आइडिया निकाल्छ । प्लेटो भने मानिस सफल हुनका लागि तीन चिजको आवश्यकता पर्ने बताउँछन्– इच्छा, भावना र ज्ञान । उनको भनाइअनुसार यी तीन चिजलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने मान्छे जीवनमा सफल हुन्छ ।
२. मनिसले थुप्रै कामको योजना बनाएको हुन्छ, सपना देखेको हुन्छ । जुन दिनप्रतिदिन फेरिँदै पनि जान्छन् । कतिले आफूले बनाएका योजना कार्यान्वयनमा समेत लैजान सक्दैनन् । तर, प्लेटो भन्छन् कि काम गर्नुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेकै सुरुवात हो । त्यसैले तपाईंले सोचेको कामलाई कार्यान्वयनमा लान थालिहाल्नुस् । जसले जीवन सफल बनाउन भूमिका खेल्छ।
३. अरूलाई पछि पार्न, पराजित गर्न र नंग्याउनका लागि मानिस लागिपर्छ र यस्तो गतिविधि सफल भएमा आफूलाई विजयी ठान्छ । यस विषयमा प्लेटोको फरक धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘पहिलो र सबैभन्दो ठूलो जित भनेको आफैँमाथिको विजय हो । तपाईंले भविष्यमा हात पार्ने जितमा यसले ठूलो भूमिका खेल्छ । तर, तपाईं आफैँभित्र पराजयको अनुभूति छ भने त्यस्ता जितले लज्जित बनाउँछ ।’
४. एउटा चर्चित भनाइ छ, ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ । प्लेटोको पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण वाणी छ । उनले स्वास्थ्यलाई जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानेका छन् । भनेका छन्, ‘स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत हुनुस् किनभने स्वास्थ्य जीवनको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो ।’
५. मानिस स्वभावैले असन्तुष्ट प्राणी हो । कतिपयले हरेक सफलतालाई समेत असन्तुष्टिको दलदलमा फसाइरहेका हुन्छन् । अरू कसैको देखासिकी र आरिस पनि असन्तुष्टिको कारक हो । प्लेटोले भने सन्तुष्टिलाई महत्वपूर्ण ढंगले प्रस्ट्याएका छन् । भन्छन्, ‘अलिकति सन्तुष्टि पनि तपाईंका लागि निकै ठूलो धन साबित हुन सक्छ ।’
६. मानिस शक्तिमा रहन चाहन्छ । सकेसम्म अरूलाई शोषण गर्न चाहन्छ र यसो गर्न सकेमा सन्तुष्टिको सास फेर्छ । तर, कहिल्यै अरूको सेवा गर्न चाहँदैन, पवित्र मनले मजदुर बन्न सक्दैन । जीवन सफल बनाउनका लागि प्लेटोको अर्को दर्शन हो, ‘जो राम्रो सेवक होइन, ऊ राम्रो मालिक पनि बन्न सक्दैन ।’
७. हामी सानामसिना कामलाई त्यति वास्ता गर्दैनौँ या भनौँ इन्कार नै गर्छौं । ठूल्ठूला काम मात्र मस्तिष्कमा बोकेर हिँड्छौँ र त्यसैअनुसारको महत्वाकांक्षा मनमा सजाउँछौँ । तर, प्लेटोको दर्शनले स–साना कामलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । जुन जीवनका लागि निकै महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ । उनले भनेका छन्, ‘स–साना कामलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्नु ठूल्ठूला कामलाई अपूर्ण गर्नुभन्दा धेरै गुणा राम्रो र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
८. हामीले भविष्यको लक्ष्य कहिले निर्धारण गर्छौं ? यस विषयमा निकै रोचक दर्शन छ, प्लेटोको । आफ्नो सुरुवाती शिक्षाको समयमै मानिसले भविष्यको लक्ष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन्, प्लेटो । शिक्षाअनुसार नै मानिसले आफ्नो भविष्यको लक्ष्य निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।
९. कैयौँ मानिस आफ्नो जीवन र कामप्रति असन्तुष्टि हुन्छन् । कतिपय त आत्महत्या गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । तर, प्लेटो भने जीवनलाई सुन्दर तरिकाले जिउन सुझाब दिन्छन् । भन्छन्, ‘जीवनलाई खेल जसरी जिउनुपर्छ, खेल खेल्दाजस्तै रमाइलो गरी ।’ यसो गर्दा मानिस सफल हुनका लागि प्रेरणा मिल्छ ।